"Waa Wax Laga Cadhoodo Dhibaatada U Dhaxaysa James Iyo Zidane, Waa Walaalkay..." - Arturo Vidal Oo Ka Hadlay Xaaladda Saaxiibkii James Rodriguez - Gool24.Net
“Waa Wax Laga Cadhoodo Dhibaatada U Dhaxaysa James Iyo Zidane, Waa Walaalkay…” – Arturo Vidal Oo Ka Hadlay Xaaladda Saaxiibkii James Rodriguez
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Barcelona ee Arturo Vidal ayaa ka hadlay xaaladda uu ku sugan yahay laacibka ay saaxiibtinimada dhow ka dhaxayso ee James Rodriguez, kaas oo xili ciyaareedka 2019/20 lagu illoobay kursiga kaydka iyo liiska kooxda oo in badan laga reebay.
James ayey u egtahay inay uga dhamaatay Real Madrid, waxaana shantii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee kooxdiisa aan lagu soo darin liiska ciyaartoyda, waxaanu ka qaday dabbaal-deggii iyo farxaddii hanashada horyaalka oo isaga oo caafimaad qaba uu gurigiisa ka daawanayay.
Arturo Vidal oo ay saaxiibo yihiin James ayaa sheegay inuu ka xun yahay, kana cadhaysan yahay xaaladda uu saaxiibkii ku sugan yahay iyo dhibaatada u dhaxaysa Zinedine Zidane, waxaanu yidhi: “Aniga iyo James walaalo ayaanu nahay, waxaananu ahayn saaxiibbo isku dheer xilligii Munich.
“Mar walba waanu wada hadalnaa, waanu wada qaadan jirnay, waana wax laga cadhoodo in dhibaato ka dhaxayso isaga iyo tababaraha.”
Laacibkan reer Chile waxa kale oo uu tilmaamay in James uu u baahan yahay fursado uu isku muujiyo, waxaanu yidhi: “James waa ciyaartoy heerkiisu sarreeyo oo uu safka koowaad kaga mid noqon karayo, mana garanayo sababta ay fursad u siin waayeen sannadkan.
Ugu dambayn waxa uu Vidal kula taliyey James inuu xagaagan gaadho go’aan u wanaagsan xirfaddiisa, waxaanu yidhi: “Waxaan rajaynayaa inuu qaadan doono go’aanka ugu wanaagsan oo uu bilaabi doono ciyaarta.
“Waxay ila tahay in dadka xiiseeya kubadda cagtu ay jecel yihiin inay arkaan ciyaartoyda tayada leh, James na ciyaartoydaas ayuu ka mid yahay. Waa inuu koro, mustaqbalkiisa raadsado, isla markaana helo meel uu ka ciyaaro oo uu ku raaxaysto kubadda cagta.”
James waxa uu xili ciyaareedkan u saftay Real Madrid 14 kulan oo intooda badan uu beddel ku yimid ama beddel ku baxay, waxaanu kaliya dheelay 728 daqiiqadood ka hor intii aan dhamaan shantii ciyaarood ee ugu dambeeyey laga saarin safka kooxda.